Walaghiin Ergamtootaa Maseene – OROMOCENTRE
You are here: Home / Uncategorized / Walaghiin Ergamtootaa Maseene
Walaghiin Ergamtootaa Maseene
July 6, 2012 by Oromo Community in Melbourne Leave a Comment
(Oromocentre, Melbourne, 6 July 2012) Walgahiin ergamtoota Wayyaanee yeroo lammataaf magaalaa Melbourne keessatti waamame mormii fi balaaleffannaa sabboontotaan fashale.
Hawaasti Oromoo, Ogaaden, Sidaamaa fi Itoophiyaa biroo waltahuudhaan walgahii wayyaanotaa kan Hotel Hayaat keessatti waamame erga fashalsanii booda, ergamttoti Wayyaanee tooftaa biraattin walgahii isaanii ganda ganda keessatti godhachuuf yaalanii turan
Haata’uutii kutannoo fi jabina hawaasa Kaayyoo dhugaa qabuun walgahiin ganda ganda keessatti waamames otuu hin milkaa’iin hafee jira.
Akka keessa beektoti gabaasaa keenyaaf himanitti, ergamttoit Wayyaanee gooftolii isaanii gammachiisuuf bifa afeerraatiin manan namoota dhuunfaatti walgahuuf yaalaniiru.
Garuu, bakka hundatti hawaasti dhimmichaaf keettoo keewwachuufi ergachuun akkasumas jala adeemuun akka isaan bakkayyuutti nagaa dhabanii jeeqamanii fi bir’atan waan godhaniif walgahiin isaanii kamuu otuu hin milkaa’iin akka bacancaretti hafee jira.
Bakka walgahiif qabatan maratti yeroo walgahan, namuu walamanuu dhaabuun, namuu dubbachuu dhiisee waldhaggeeffataa akka ture odeessi argame hubachiisee jira.
Kan malees, Adoolessa 3, 2012 galgala walgahiin Hoteela Hilton keessatti waamame illee gamtaa hawaasa Oromoo fi Ogaden, akkasumas lammilee Itoophiyaa birootiin akka fashalu godhamee jira.
Hawaasti Oromoo fi Ogaaden Hoteela fuulduratti argamanii mormii dhageessisaniin ergamtooti achitti argaman wareeranii yoo baqatan, kanneen kaanis halaala irraa sodaatanii deebi’uu isaanii gabaasaan keenya argee jira.
“Otuu poolisiin namoota mormiif bahan alatti dhoowwuu baatee silaa ergamtooti Wayyaanee hoteela keessatti daaraa taati,” kan jedhe gabaasaan keenya, warri Wayyaanee akka gad hin baanee poolisooti waan dhorkaniif mormii saatii sadii oliif adeemsisameen walgahiin hoteelicha keessatti godhamuuf yaadamee fashaluun isaa beekamee jira.
Akka hiriirri mormii sun eegaleen lammiileen Ogaadeeni muraasti kanneen walgahicha irratti argamuuf Hoteela seenanii turan baqatanii kan bahan yoo ta’u, yeroo mormitooti itti dhufanii wayyaanee ta’uu fi dhiisuu isaanii gaafataniitti,” nuti Wayyaanee miti; nuti Sumaaota,” jechaa akak baqatan gabaasaan keenya argee jira.
Yeroo warri morman ala irraa dhaadannoo dhageessisan, warri Wayyaanee mana keessaa nagaan teessee haasa’uu waan dadhabdeef gara kutaa ciisicha isaaniitti seenuuf dirqamanii jiru.
Keessayyuu, yeroo warri adii ala irraa dhufan nagaadhaan oldabarsaa yeroo ergamtooti dhufte immoo itti iyyuun akka isaan ofirra deebián gochaa kan turan hiriirtonni kunneen, kunis naamusaan Kaayyoo isaaniif dhaabbachuu isaanii mirkaneessa jedhamee jira.
“Kan na boonsu, Oromummaa kooti. Oromoon harka kennuu hin beeku; Oromoon kan bitameef bakka hin qabu,” kan jedhe dargaggoon Oromoo tokko immoo, ”Oromummaan keenya diina salphisuu malee diinaaf salphachuun hin ibsamu,”jechuun kutannoo ergamtoota salphisuuf qabu hubachiisee jira.
Sabboontoti Oromoo hiriira mormii kan irratti hirmaatan alaabaa Oromoo qabatanii, dhaadannoo hamalchiisaa dhageessisaa qooda Oromummaa isaanii biyya alaa keessattis gahummaan bahatanii jiru.
Shamarreen Oromoo mormii kana irratti argamte akka naaf ibsitetti, kaayyoon mormii isaanii mootummaan isaan bakka bu’an kan humnaan ummata fixaa jiru ta’uu saaxiluu dha.
“Nuti biyya keenya dhiifne akka baanu kan nu godhe mootummaa Itoophiyaa ti. Mootummaan sun biyyaa nu baasee asitti immoo dhufee nu gowwoomsuu fedha,” kan jette Shamarreen Oromoo kun, “Wayyaaneen sirna ummta keenya fixaa jiru waan ta’eef karaa dandeenyu hundaan dura dhaabbannoo keenya agarsiifna,” jechuun jibbinsa mootumichaa fi bakka bu’oota Wayyaaneef qabdu ibsitee jirti.
Duraanis ergamtooti Wayyaanee dhoksaan bakk addaddaatti walgahuuf yaalan iyyuu jabinaa fi kutannoon akka fashalu kan godhame ta’uun hubatamee jira.
Keessaayyuu, xalayaa kijibaa lama barreessuun bakkaa fi saatii walgahii sanii burjaajessuu fi mormitoota dogoggorsuuf yaaliin godhan hordoffii jabaan akka hin mikoofne kan godhamee dha.
Ergamtooti biyya alaa keessatti walgurmeessanii sagantaa kan qopheessan kanneen faayidaan bitamanii biyyatti deddeebi’anii dha.
Ergamtooti kunneen akka namni bakka walgahii hin seenneef waraqaa waamichaa bifa lama qabu qopheessanii raabsan; akkasumas bakka walgahii dursanii qabanii akka namni iddoo addaddaatti qoodamu godhan.
« Jilli Wayyaanee Australia keessatti salphatte!
All Are Invited to Bilisummaa-Fest in Oromia »